Exchange Platform magaabay wiil Fiber Laser Goynta Machine AMA-E - Shiinaha Shandong Oree Laser
Exchange Platform magaabay wiil Fiber Laser Machine Jarida AMA-E
Madal Exchange mashiinka fiber goynta jari karaa inta badan shabaqa biraha, gaar ahaan boosteejo sarrifka ay ku badbaadin karto in ka badan 50% ka mid ah meel iyo qiimaha dadka kale marka la barbar dhigo, Isla mar ahaantaana, gaari karo sax goynta sare iyo hufnaan. Waa sahlan tahay, waayo, dadka isticmaala in ay ku shaqeeyaan oo ay u ilaaliyaan. Isla mar ahaantaana, geedi socodka shirka adag ay hubisaa in howlgalka xasiloon mishiinka usii sare. Indhaha fiber Mashiinka goynta laser siinta dadka isticmaala awooda goynta awood iyo hufnaan leh accessories fasalka top-keeno.
Ahama, steel carbon, steel daawaha, steel guga, saxan copper, saxan aluminium, dahab, iyo lacag, titanium iyo alaabooyinka kale ee saxan.
Si weyn loo isticmaalaa in advertising, danab-soo-saarka korontada golaha hooseeyo cadaadiska sare /, accessories dhar mashiinada, qalabka jikada, baabuurta, mashiinada, wiishashka, accessories korontada, gogo 'gariiradda guga, qaybo ka mid line metro iyo warshadaha kale.
ISWAYDAARSI BARNAAMIJKA URURKA magaabay wiil MAKIINADDA goynta laser fiber AMA-E
Yaskawa Howlsocodsiinta Moto
Yaskawa Electric waa soo saaraha xirfadeed oo ku yaalla beerta gacanta ku dhaqaaq. Waa shirkaddii ugu horreysay ee Japan in ay motor Howlsocodsiinta ah. Badeecada lagu yaqaan in ay xasiloonida iyo xawaaraha, oo iyagu waa kharash-ool ah. Waxay yihiin iibka ee dunida ugu weyn oo magac Howlsocodsiinta ugu used in industry ee. In Shiinaha, Yaskawa ayaa degan saamiga ugu weyn ee suuqa sanado badan.
Sugnaantu dhigidda ± 0,03 mm ± 0,03 mm ± 0,03 mm
Saxnimada of Positioning ± 0.02 mm ± 0.02 mm ± 0.02 mm
Previous: Laser miiska fiber TABLE sixitaanka MAKIINADDA RT
Next: AWOODDA SARE fiber laser MAKIINADDA goynta AMA-H
AWOODDA SARE fiber laser MAKIINADDA goynta AMA-H
ISWAYDAARSI XAASHIDA TABLE & fiber tuubo CU laser ...